30/09/2017 admintriatra 0
Fampiaraham-peo nikoizana tany amin’ny taona 60. Hamerina indray ny fiarahany taloha i Henri Ratsimbazafy sy Voahirana. Fampisehoana indroa miantaona no atolotr’izy ireo amin’izany etsy amin’ny CCesca Antanimena ny 29 septambra amin’ny 7 ora sy sasany …Tohiny
Basikety – CCCOI 2017 : Tafita amin’ny manasa-dalana ny Ascut Mada
Manohy ny lalany hatrany ny Ascut (Madagasikara) eo amin’ny fiadiana ny “Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien”, na CCCOI 2017 eo amin’ny taranja basikety, sokajy lehilahy sy vehivavy. Fifaninanana tanterahina, amin’izao fotoana izao, eto …Tohiny
Jiolahy miisa telo, sokajiana ho isan’ireo tena gaigilahy amin’ny fanafihana mitam-piadiana any Toamasina no lavon’ny polisin’ny FIP any an-toerana, ny alakamisy alina lasa teo. Olon-dratsy miisa efatra hafa izay nahitana vehivavy iray, naman’izy ireo kosa …Tohiny
Tsiafajavona Ankaratra : Vohitra telo nahazo rano fisotro madio
Tafiditra amin’ny fanomezana fotodrafitrasa ilain’ny mponina amin’ny fiainana andavanandro. Vohitra telo ao anatin’ny fokontany Anosiarivo ao anatin’ny kaominina Tsiafajavona omaly no notolorana rano fisotro madio, vokatrin’ ny fiaraha-miasa tamin’ny vondron’orinasa Star. Sady ratsy lalana no …Tohiny
Notanterahina omaly ny fitokanana ny ivon-toeram-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny herin’ny masoandro, na ny “Centrale Solaire Photovoltaïque” etsy amin’ny Zoom Ankorondrano. Tonga nanatrika izany fotoana izany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nandritra ny lahateny nataony no ...Tohiny